Monograph – Page3– Gniap
By admin, 1 year December 28, 2020 ago
I didn’t write on this blog forawhile, maybe the last time is3months ago. Now I’m writing here to record my current status and also escape from the weird thoughts. During these months(COVID time), I felt like I found myself in career way. Like studying PowerBI , Read more…
By admin,2years November 5, 2020 ago
Learning Path <1>
This is my first time – note taking in English & publish to the web. I’d never done it before,just hoping I can finish the writing smoothly and correctly.(English Language is still beingaghost that’s frightening me everyday. So,forgive me if I made any grammar or vocab mistakes.) September Read more…
Midnight Thought <2>
ဒီ ဘလော့ပေါ်မှာ စာမရေးဖြစ်တာ ကြာပါပီ ။ ဒီအတိုင်း Depression နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ လျှောက်ဖတ်ကြည့်ရင်း ‘tell about it’ ဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်ကို တွေ့လို့ ဒီအတိုင်း ဘလော့ လျှောက်ရေးတာ။ ဆရာကိုတာ ရဲ့ ဇင် စာအုပ်ထဲကလိုဆို Zen Diary လို့ ပြောရမလားပဲ ။ မစဥ်းစားပဲ ဦးနှောက်ထဲကို ဝင်လာသမျှ စာကြောင်းတွေကို ကောက်ခြစ်ရေးတာမျိုး ။ (စာရေးဆရာတယောက် ၏ မှတ်စုများ – စာအုပ်ထဲက ဖြစ်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်(၅) မှာပဲ အသက် ၂၅ နှစ် ပြည့်တယ်။ အဲလိုတွေးလိုက်ရင် ပိုစိုးရိမ်စိတ်များတယ်။ ဒီလထဲမှာလဲပဲ Read more…
https://www.chronicle.com/article/Putting-an-End-to-When-Am-I/233901 အချိန်ရရင် အပေါ်က မူရင်း article ကိုလဲ ဖတ်စေချင်တယ်။ ၂၀၁၅ က ရေးထားပေမယ့် ဒီနေ့အထိ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားလောက မှာ အသုံးများနေဆဲဖြစ်တဲ့ ‘စကားတခွန်း’ နဲ့ သက်ဆိုင်လို့ပါ။ ပြောနေကြအတိုင်း ဆို – “ဒီစာတွေက သင်ပီး ဘယ်မှာ သုံးရမှာလဲ?” “ဒီသင်ခန်းစာတွေကို လက်တွေ့ ဘယ်လိုအသုံးချရမှန်းမှ မသိတာ” စသဖြင့် ဆင်ခြေပေါင်းများစွာကို ကျနော် ကျောင်းသားဘဝတုန်းကတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောခဲ့မိဖူးပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အဲဒီမေးခွန်း (ဆင်ခြေ) က လုံးဝ မှားတဲ့အကြောင်းကို မူရင်းဆောင်းပါးထဲမှာ ရေးထားတာပါ။ သူ ရေးထားတဲ့ စာအရှည်ကြီးထဲက သဘောကျတဲ့ တပိုဒ် ကို တတ်သလောက် Read more…
ဒီနေ့ ခေတ်မှာ မိဘတိုင်းလိုလိုက ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘာသာစကားပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) နည်းပညာကွန်ပျူတာပိုင်းမှာ တတ်မြောက်စေလိုတဲ့ စေတနာ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအတွက် သင်တန်းကျောင်းတွေလဲ အပြိုင်အဆိုင် ပေါ်လာကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မဟုတ်တဲ့ အခြားသော နိုင်ငံတကာ မှာရော ဘယ်လို သင်ကြားမှုတွေ ၊ စိတ်ဝင်စားမှုနေသလဲ ။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ ရဲ့ သင်ကြားမှု စနစ် ၊ အရင်းအမြစ်တွေကရော ဘယ်လို အခြေအနေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မျက်ခြေမပြတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ An Hour of Code with Artificial Intelligence! ဆိုတဲ့ online webinar Read more…
By admin,3years November 30, 2019 ago